प्रधानमन्त्रीले मनपरी गरेको माधव नेपाल पक्षको आरोप -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन २८, २०७७ समय: २०:११:२४
आफ्नै गुटका मात्रै प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पक्षका तीन नेतालाई मन्त्री बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेपछि नेकपाभित्र हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालय डा. युवराज खतिवडाको बहिगर्मनपछि खाली भएको थियो । त्यहाँ महासचिव विष्णु पौडेललाई ल्याइएको छ ।
गोकुल बास्कोटाले विवादमा परेर राजीनामा दिएपछि सञ्चार मन्त्रालय खाली भएको थियो, जहाँ ६ महिनासम्म डा. खतिवडाले नै नेतृत्व गरेका थिए । अहिले सञ्चारमा आफ्नै प्रियपात्र पार्वत गुरुङलाई सरुवा गरेर ल्याइएको छ ।
माधव नेपाल पक्षको आरोप : प्रधानमन्त्रीले मनपरी गर्नुभयो